Ny mpampifandray Qisheng haingana tsy miovaova, azo antoka ary "quickfit" dia vita amin'ny akora simika ary mety amin'ny ankamaroan'ny tsipika fampitam-baovao. Na solika, solika, etona, fampangatsiahana rano ary tsipika mitondra rivotra, ireo mpampifandray Qisheng dia mifanaraka manokana amin'ny fampifanarahana ireo rafitra fantsom-piara mandeha ho azy. Ny mpampitohy Qisheng haingana dia mandray rafitra fametahana tombokase indroa, ary ny peratra O anatiny dia vita amin'ny fingotra novaina, izay namboarina manokana ho an'ny fananana ara-batana sy simika ...
Ny fantsom-bozaka vita amin'ny fonosana vita amin'ny tanana dia misy 2-ply hatramin'ny 4-ply nohamafisina, ary mihaona na mihoatra ny SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN ary ISO Standard. Ity teknolojia azo ampiharina amin'ny savaivony anatiny lehibe sy ny tsindry ambony tampoka dia mitaky.
T endriny Coupler Silika
Famaritana ara-teknika: fitaovam-piadiana silikera avo lenta 0.3 ~ 0.9Mpa Fanamafisana nomex / polyester hatevin'ny 2-3mm Fandeferana habe ± 0.5mm Hamafin'ny 40-80 morontsiraka maripana miasa - 40 deg. C hatramin'ny + 220 deg. C fanoherana avo lenta 80 ka hatramin'ny 150psi Loko mena / mavo / maitso / volomboasary / fotsy / mainty / manga / volomparasy sns. Certificate IATF 16949: 2016 OEM ekena T endrika silikonina kopia ampiasain'ny matihanina amin'ny fiara fiara toy ny performance avo ...
Tady fitrandrahana fingotra
Extrusion Rubber Hose dia manamafy ny 1-ply / 2-ply, ary mihaona na mihoatra ny SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN ary ISO Standard.
Ny fantsom-bozaka vita amin'ny lasitra dia voahodina amin'ny alàlan'ny dingan'ny famokarana akora vita amin'ny fingotra ao amin'ny lavaka famonoana mihidy miaraka amin'ny fanampian'ny fanafanana sy fanerena. Ny vokatra dia fantson-drivotra, ampiasaina amin'ny fidiran'ny rivotra amin'ny fitaovana mekanika, mahatohitra ny fahanterana, ny mari-pana ambany amin'ny ranon-javatra sy ozone ary ny fihenan'ny rivotra tsara. Ny fantsom-pandrefesana vita amin'ny fingotra dia misy 2-ply na 3-ply ary tariby vy nohamafisina, ary mihaona na mihoatra ny SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN ary ISO Standard. Ity teknolojia ity dia mihatra amin'ny diame anatiny lehibe ...